Mo Faarax Halyay U Babac Dhigay Carqalad Kasta Oo Yoolkiisa Iska Hortaagi Karta | Somaliland.Org
Mo Faarax Halyay U Babac Dhigay Carqalad Kasta Oo Yoolkiisa Iska Hortaagi Karta
August 8, 2012	Waxaan Kuu Soo Akhriyay: (Qaybtii 1aad) Xassan Cumar Hoorri
Kuwa ayaanka u helay, habeenkii Axadda, 05/08/2012.in ay ku sugnaadaan garoonka weyn ee “Olympic Stadium”, London, Carriga Britain, waxaa ay noloshooda xusuusnaan doonaan farxadda, sawxanka iyo buuqa bogaadinta ee hal mar ay si wadajir isla kaceen daawadayaasha tartanka ka dib markii Mo Faarax dhifsaday Billadda Dahabka ah ee orodada 10,000m.
Sida la sheegay, Mo Faarax isaga laftiisu amintaas waxaa uu sii yiqiinsaday in uu yahay nin British ah oo dalkiisa laga jecel yahay. Mo waxaa uu carriga Ingiriiska tegay isaga oo siddeed jir markaas oo waalidkii kala carareen colaada ba’an ee ka aloosnayd dalkiisa, Somaliland. Sida uu sheegay qof ay qaraabo yahiin, Mo Faarax marar badan waxaa uu dareemayay in aan laga rabin Britain. Hase ahaatee, sawaxanka maanta ka soo yeedhay garoonka waxaa uu degay qalbigiisa.
Waxaa xasuus mudan saacaddaa muuqaalka Mo Faarax oo hagoogtay Calanka Boqortooyada, isla markaana, taageersanayay marwadiisa, Tania, oo u dhalatay Hingiriiska. Xilligaa waxaa hareeta ka joogtay gabadha yar, 6 jir, Rhianna, ee ay dhashay ooridiisu. Waxaa hubaal ah, guud ahaan Tartanka Ciyaaraha London Olymp 2012 iyo muqaalka aan soo sheegnay in ay ladh ku kicin karaan dhallinyarta hanka leh marka ay ogaadeen halka uu ka soo kicitimay Mo Faarax iyo maqaamka uu maanta taagan yahay. Haa adiguna waa aad yeeli kartaa!
Mo yaraantiisii waxaa uu ku soo koray degmada Feltham ee Galbeedka London, halkaas oo degaan u ah dadka caddaanka degel fadhiga ah, waxaa uu had iyo jeer ka biyo diidi jiray loollanka iyo ismaandhaafka ka taagan dhaqamada kala duwan arrintaas oo u soo jidi jirtay dirir gacan-ka-hadal ah. Sida uu sheegay, Alan Walkinson, macallinkiisii Jimicsiga, Mo dhowr maalmood ayaa iskuulka laga eryay ka dib markii uu dagaalamay isagaa oo digniin hore qabay. “Waxaa uu la soo kacaamay bulshada Somaaliyeed oo markaas aad u tira yaraa. Inta aanu afka baran, waxaa uu ku jiray difaac. Mararka qaarkood dagaal ayuu ka kicin jiray dugsiga uu wax ka barto Feltham Community School”. Sidaa waxa yidhi macallinkiisii hore.
Wax badan oo ay u muuqatay in dugsiga laga eryo, waxaa mar kasta ku hagoogan jiray macallinkiisa Jimisciga (PE) Mr. Walkinson kaas oo dareensanaa in Mo uu hibo u leeyahay ciyaaraha. Haddii aanu arrinku sidaa u dhicin, ma dhacdeen in heeska calanka Britain laga tumo garoonka iyo in dalka Britain ay u soo hoyoto Billadda Dahabka ee 10,000 Meter.
Guul: Mo Faarax, oo iska reebay orodyahannada Tariku Bekele, Ethiopia, iyo Galen Rupp, USA tartankii kama danbaysta ahaa ee raga, 10,000-metre, halkaas oo uu ku qaaday Billadda Dahabka ah.
Mo Faarax 11 jir.
Mo Faarax waxaa uu 1983 ku dhshay degaanka Arabsiyo, Gabiilay ee Somaaliland. Aabahiis Mukhtar waxaa uu degenaa carriga Hingiriiska, hase ahaatee, waxaa uu hoyadiis ka soo guursaday dalka gudahiisa. Halkaas ayuu Mo ku dhashay waxaana uu ku soo barbaary yaraantiisii in uu ku cararo dhul buuralay ah oo jooggiisu dhan yahay 4,000ft. Halkaa waxaa laga garan karaa awoodda sambabadiisa eek u soo tababartay degaankaas.
Markii ay da’diisu 7 ahayd, waxaa loo qaaday dalka Djibouti si uu u la noolaado qarabadiisa, isla markaan looga dheereeyo colaada ka taagnayd dalkiisa. Mo markaas waxaa lagu naanaysi jiray ‘Bine Bine’; iyada oo loogu magic daray filim qosol ah oo uu aad u jeclaa.
La soco ……………………………
Previous PostMarka Xidigu ka Faroorsado ayuu Gal-gashaa!Next PostWasaarada Duulista oo ka war-bixisay halka uu marayo dib u dhiska madaarka	Blog